Dadweynaha Ree Gaarisa Ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya Oo Soo Dh... | Universal Somali TV
Dadweynaha Ree Gaarisa Ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya Oo Soo Dhaweeyay Mudo Dheerna Sugayay Duulimaadkii Ugu Horeeyay Oo Si Toos Ah Uga Kaca Magaalada Garissa.
Dadweynaha ree Gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya oo mudo dheer sugayay in mar un ay ku safraan diyaarada hawada ayaa hadda u suurta gashay kadib markii laga hirgaliyay duulimaadkii ugu horeeyay oo si toos ah uga kaca magaalada garissa.
Diyaarada freedom airline oo ka qaadatay rakaabkii ugu horreeyay maalintii isniinta magaalada Garissa ilaa magaalada caasimada ah ee Nairobi ayaa shaqayn doonta maalmaha Isniinta iyo Jimcaha. iyada oo qiimaha tigidhka lagu raacayo uu yahay ksh 5,000 oo lacagta Kiinya.
Sida laga soo xigtay Shillow Abukar, maareeyaha shirkada diyaaradaha, wuxuu go'aansaday inuu bilaabo adeega duulimaadyada kadib codsiyo badan oo ka yimid degaanka.
Shiiloow oo la hadlay saxaafadda ka dib markii rakaabkii ugu horreeyay ay ka duuleen magaalada Garissa, ayaa wuxuu sheegay in hay'addu ay noqon doonto mid joogto ah isagoona ku booriyay dadka deegaanka in ay ku safraan hawada madaama si deg deg ah iyo qiimo macquul ah lagu qaadayo.
"Waxaa runtii aad ii dhiirigeliyay tirada badan ee dadka usoo baxay inay raacaan diyaarada maalinta ugu horeysay oo 17 qof ah waxaana ku rajo weynahay in mustaqbalka aan heli doono tiro aad u ballaaran oo diyaaradda raaco," ayuu yiri Shillow .
Shiiloow ayaa intaa raaciyay in basaska sida caadiga ah ay ka qaadaan dadka rakaabka ksh 1000. waxayna ku qaadataa 6 saacadood Garissa ilaa Nairobi marka 5,000 wax saacad ka yar waa arin aad u fiican islamarkaana shirkadda dayuuradaha ay qorsheyneyso in ay maalin kasta sameyso duulimaad, inkasta oo ay ku xiran tahay rakaabka.
Fatuma Cabdi oo magacaaw ku timaada golaha barlamaanka dawlada hoose ee Garissa , oo ka mid aheed dadkii maalintii ugu horeysay raacay diyaarada ayaa soo dhaweeysay islamarkaana sheegtay in adeega diyaarada marka laga reebo kharashka lagu raacayo oo macquul ah, ay sidoo kale hoos u dhigeysaa saacadaha socdaalka.
"Marwada ayaa sheegtay in kharash badan uu ka bixi jiray markii hore. Mar kasta oo ay doonayso inay u safarto Nairobi, waxaan ku qasbanaa inaan raaco gaadhigayga oo aan kiraysto darawal. Guud ahaan waxaan isticmaali jiray lacag ku dhow 25,000.laakiin duulimaadka, waxaan badbaadin doonaa kharash badan, "ayay tiri.
Axmed Jeele oo ah ganacsade kasoo jeeda deegaanka Garissa oo ka mid ahaa rakaabka ayaa dhankiisa sheegay in jiraan dad xanuunsan oo mar walba ku qasban inay u safraan masaafo dheer marka loo soo qaadayo Nairobi si loogu daaweeyo halkaa balse haatan waxay wakhti fiican ku gaari karaan Nairobi si lagu daweeyo.
Labo sanno ka hor, diyaarad kale, shirkadda Sagal ayaa bilowday hawlgallada noocaan magaalada Garissa laakiin wakhti ma aysan socon sababtoo ah ma jirin rakaab. Waxayna tikidhka ku jarayeen 8,000 taas oo ay dad badani ay u arkayeen markaas inay badantahay.
Kan-xigaDowladda Somaliya oo ku baaqday in la...
Kan-horeMareykanka oo gaadiidka aan rasaasta ...
40,634,683 unique visits